DJ Video Loop - Logo Shatter - NYE Countdown for Djs, Vjs, Nightclubs 2020
DJ Video Loop - Shumaca Logo
Daawo Video - Magaca iyo cinwaanka loo qaabeeyey si aad uga ciyaarto shaashadahaaga VJ marka aadan haysanin fiidiyowga heesaha aad ciyaareyso. Calaamadee calaamaddaada adoo isticmaalaya muraayad madow. Wax walba waa la xaddiday. Looma dhawaaqin. (laakiin codka codka / sariirta muusikada ayaa lagu dari karaa haddii loo baahdo) Djs mihnadeed, goobo lagu caweeyo, makhaayado, hudheelo iyo casinos oo kaliya.
Laga soo bilaabo abuurayaasha NYECOUNTDOWN.com iyo KILLERSPOTS.com.